पोखरामा लकडाउन, निषेधाज्ञा वा कर्फ्यु ? आज निर्णय हुँदै – Khula kura
पोखरामा लकडाउन, निषेधाज्ञा वा कर्फ्यु ? आज निर्णय हुँदै
By admin On Aug 17, 2020
पोखराका अरु वडामा पनि संक्रमण दर विस्तारै उकालो लाग्दै छ । लकडाउन गर्ने, निषेधाज्ञा गर्ने वा कफ्र्यु लगाउने अथवा कुन ढाँचामा जाने भनेर पोखरा महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले गृहकार्य गरिरहेका छन् ।
पोखरामा आइतबारमात्रै २२ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । शनिबार पनि १२ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो । आइतबारसम्म पोखरामा कोरोना संक्रमितको संख्या २ सय ४ पुगेको छ । संक्रमितमध्ये १ सय १५ जना निको भएका छन् भने १ जनाको मृत्यु भएको छ ।गण्डकी प्रदेशका अरु जिल्लामा पनि संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीको तथ्यांक अनुसार कास्की, स्याङ्जा र तनहुँमा सक्रिय संक्रमित बढी छन् । हाल म्याग्दी, मनाङ र मुस्ताङ संक्रमणमुक्त छन्
। प्रदेशभर १७ सय ३४ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । तीमध्ये १५ सय २७ संक्रमित निको भएको स्वास्थ्य निर्देशक विनोदविन्दु शर्माले जानकारी दिए ।गण्डकीमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ५ पुगेको छ । स्याङ्जाका २, बागलुङ, कास्की र गोरखाका १÷१ पुरुषको मृत्यु भएको हो । कोरोना परीक्षण हुँदै आएको क्षयरोग उपचार केन्द्रमा २ साता पहिले अटो एक्स्ट्याक्टर मेसिन जडान भएसँगै गण्डकीमा कोरोना परीक्षण क्षमता बढेको छ ।
अहिले दैनिक ८ सयभन्दा बढी स्वाब परीक्षण हुँदै आएको छ ।गण्डकीमा अहिलेसम्म ३४ हजार ३ सय २७ नमुना परीक्षण भइसकेको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । गण्डकीका विभिन्न जिल्लाका स्वाब परीक्षणका लागि पोखरा ल्याइने गरेको छ । कतिपय जिल्लाले भने काठमाडौं र अन्त पनि पठाउने गरेका छन् ।कोरोना परीक्षणका लागि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र क्षयरोग केन्द्रमा पिसिआर मेसिन जडान गरिएको छ । कोरोना परीक्षणका लागि दुवै ल्याबमा गरेर २८ प्राविधिक छन् ।
क्षयरोग केन्द्रमा पिसिआर जडान गरेर २ महिनाअघि मात्र कोरोना परीक्षण थालिएको हो । क्षेत्रीय अस्पतालको प्रयोगशालामा भने चैत तेस्रो हप्तादेखि परीक्षण हुँदै आएको छ ।कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा आइतबार पोखरा महानगरपालिकाले विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल ग¥यो । सर्वदलीय बैठकमा सहभागीले पोखरामा कडा खालको निषेधाज्ञा जारी गर्न महानगरलाई सुभाव दिए ।बैठकमा नेकपा, कांग्रेस, राप्रपा लगायत विभिन्न दलका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
सहभागीले कडा निषेधाज्ञा गर्न सुझाएको र के गर्ने भन्ने विषयमा सोमबार बस्ने कोरोना रोकथाम मूल समिति पोखराको बैठकमा छलफल हुने मेयर मानबहादुर जिसीले जानकारी दिए ।त्यहाँ छलफल गरेपछि प्रस्ताव जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति (सिसिएमसी)को बैठकमा लगिने उनले बताए । निषेधाज्ञामा महानगर अघि बढे साथ दिने दलका प्रतिनिधिहरुले बैठकमा बताएका थिए ।
‘संक्रमित बढिरहेका छन् । निषेधाज्ञा गर्नुपर्छ भन्नेमा सायद सिडिओ साब पनि सकारात्मक हुनुहोला,’ बैठकका एक सहभागीले भने ।
मूल समितिको बैठक सोमबार बिहान साढे ७ बजेलाई बोलाइएको छ । महानगरद्वारा गठित कोरोना रोकथाम मूल समिति संयोजक उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ छिन् । दलहरुले सुझाए झै निषेधाज्ञाको निर्णय समितिले गर्न सक्ने सम्भावना छ ।
यस्ताे हुँदैछ तयारी विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन
कल्पना र कृष्णबहादुरको लेनदेन देखिएन; गोंगबु हत्याकाण्ड